छिटो फैलिने नयाँ कोरोना भाइरसबारे ८ प्रश्न, वैज्ञानिकहरूको जवाफ - DURBAR TIMES
HomeHealthछिटो फैलिने नयाँ कोरोना भाइरसबारे ८ प्रश्न, वैज्ञानिकहरूको जवाफ
अध्येताहरूले जब यसको ‘जिनोम’ मिहिन अध्ययन गरे, त्यतिबेला यसमा तुलनात्मक रूपले ठूलै परिवर्तन भएको पाए। वैज्ञानिक हिसाबले हेर्दा २३ अंकको परिवर्तन भेटियो। कोरोना भाइरसमा भएका धेरैजसो परिवर्तनले भाइरसलाई या त नोक्सान वा प्रभावहीन पारिदिँदै आएको थियो। तर बी.१.१.७ नाम दिइएको यो परिवर्तन भने संक्रमण विस्तार गर्न एकदमै प्रभावकारी हुने अवस्था देखियो।
‘तर, यो नयाँ प्रजाति केटाकेटीका मामिलामा पनि वयस्ककै मात्राको संक्रामक हुनसक्छ,’ बेलायत सरकारका सल्लाहकार तथा इम्पेरियल कलेज लन्डनकी भाइरसविज्ञ वेण्डी बर्क्ले भन्छिन्।
यसअघि पनि कोरोनाको एउटा परिवर्तित भाइरस प्रजाति फेला परेको थियो। त्यसलाई ‘६१४ जी’ नामाकरण गरिएको थियो। त्यो प्रजातिमा ठीक यस्तै परीक्षण अध्येताहरूले गरेका थिए। कोषहरू र विभिन्न जनावरमा गरिएको परीक्षणका आधारमा त्यो प्रजाति पनि आफ्ना अघिल्ला रुपभन्दा बढी संक्रामक भेटिएको थियो।
तर, सावधानीपूर्वक अपनाइएको उपायले उक्त ‘६१४ जी’ प्रजातिलाई पनि अन्यजस्तै नियन्त्रण गर्न सफलता मिलेको थियो। अहिले त्यस्तै स्थिति यो नयाँ ‘बी.१.१.७’ प्रजातिमा पनि देखिएको छ।
‘हामीले पहिले नै अपनाएका भौतिक दुरी, मास्क, हात धुने र स्यानिटाइजर लगाउने जस्ता सुरक्षा उपाय नै यसका मामिलामा पनि प्रभावकारी हुनेछ,’ युनिभर्सिटी अफ सेन्ट एन्ड्रयुज स्कुल अफ मेडिसिनकी संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. म्युज सेभिक भन्छिन्, ‘यति कुरा चाहिँ अहिल्यै थाहा भइसकेको छ।’
यो नयाँ भाइरससँग मिल्दोजुल्दो एउटा गुण दक्षिण अफ्रिकामा भेटिएको अर्को परिवर्तित भाइरसमा पनि पाइएको थियो। त्यो प्रजाति दक्षिण अफ्रिकाको तटवर्ती इलाकामा असाध्यै तीव्र गतिमा विस्तार भएको थियो। र, प्रारम्भिक अध्ययनमा त्यहाँका चिकित्सकले यो खालको भाइरसबाट संक्रमित मानिसले अत्यन्तै बढी ‘भाइरल लोड’ बोकेको थिए।
यी दुवै खोपले हाम्रो शरीरको रोग प्रतिरोधी क्षमतालाई कोरोना भाइरससँग लड्न प्रतिरोधीका रूपमा एन्टिबडी तयार पार्न सिकाउँछ। त्यो एन्टिबडीले भाइरसको सतहमा बस्ने प्रोटिनसँग लड्छ। त्यो प्रोटिनलाई ‘स्पाइक’ भनिन्छ।
परिवर्तन हुँदा कोरोना भाइरसको ‘स्पाइक प्रोटिन’ को ढाँचा फेरिन सक्छ। यसले गर्दा एन्टिबडीले उक्त स्पाइक प्रोटिनलाई दह्रोसँग अँठ्याउन अलि गाह्रो हुन्छ। अहिले बेलायतमा फेला परेको नयाँ भाइरसमा स्पाइक जीनको मात्रा आठ छ।
स्वास्थ्य विज्ञान र हाम्रो शरीरको यस्तो तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै विज्ञहरूले यो नयाँ भाइरसलेले भर्खरै पत्ता लागेका खोप फेल गराउन सक्ने कुनै सम्भावना देखेका छैनन्। यसलाई थप पक्का गर्न ‘वाल्टर रिड आर्मी इन्स्टिच्यूट अफ रिसर्च’का अध्येताले यी नयाँ भाइरसको स्पाइक प्रोटिनमा आउने परिवर्तन गहन अध्ययन सुरू गरिसकेका छन्।
कोरोनाविरुद्ध भर्खरै विकासित खोपको प्रभावलाई बेलायतमा देखिएको नयाँ भाइरसले कुनै असर पार्न नसक्ने डा. मोनसेफ स्लावीले पनि बताइसकेका छन्। उनी अमेरिकी नागरिकलाई खोि वितरण गर्ने संघीय प्रणाली ‘अपरेसन वार्प स्पीड’का प्रमुख वैज्ञानिक सल्लाहकार हुन्।
‘भविष्यमा कुनै दिन कुनै प्रकारले परिवर्तित भाइरसले कुनै विन्दुमा गएर अहिलेका खोपलाई निश्प्रभावी बनाइदिने सम्भावान हुन्छ,’ डा. मोनसेफ भन्छन्, ‘तर, अहिले नै खोप निश्प्रभावी हुने सम्भावना असाध्यै कम छ।’
‘बेलायतमा जुन भाइरस देखिएको छ, त्यो फेरि कुनै कमजोर रोग प्रतिरोधी क्षमता भएको बिरामीमा सरिदियो र त्यसले फेरि अर्को नयाँ स्वरुप लियो भने चाहिँ खोपको प्रभावकारितालाई चुनौती दिनसक्ने स्थिति नआउला भन्न सकिन्न,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसको अर्थ खोप कामै नलाग्ने होइन, कम प्रभावकारी देखिने हुन सक्छ।’
‘त्यसबारे अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन,’ डा. एन्डरसन भन्छन्, ‘तर निकट भविष्यमै हामीले थाहा पाउने पक्का छ।’
( setopati बाट साभार गरिएकाे याे लेखद न्यूयोर्क टाइम्सका लागि कार्ल जिम्मर र बेनेडिक्ट क्यारेले लेखेको स्टोरीको भावानुवाद हाे। यो लेखका निम्ति बेन्जामिन मुलेर र काटी थोमसले पनि सघाएका छन्।)
Previous articleओली पक्षीय नेकपाले गर्याे १५ निर्णय, (निर्णयसहित)